हामी तेस्रो विश्व युद्ध कसरी जित्न सक्छौं? उत्तर तपाईको लागि त्यहाँ हुन सक्छ। - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: दक्षिण अफ्रीका। एक दक्षिण अफ्रिकीको साथ अन्तर्वार्ता। र अन्तर्वार्ताको बीचमा एक अप्रत्याशित परिवर्तन भयो
अर्को पोस्ट: गेब्रोनमा के गर्ने - बोत्सवाना
पोष्ट गरिएको 10 जनवरी 2020 द्वारा रोमोमो लुकाना
अमेरिका र इरानको बीचमा भएको यस द्वन्द्वको कारणले केही मृत्यु भइसक्यो र दुर्भाग्यवस त्यहाँ अझ बढी मृत्युहरू हुन सक्दछन् ... म चिन्तित थिएँ र यस्तो सोचमा थिए कि कसरी विश्व युद्ध जित्न सकिन्छ र पीडितहरूलाई कम्तिमा सम्भव तुल्याउन सकिन्छ?
तेस्रो विश्व युद्ध कसरी जित्ने?
र यसको बारेमा सोच्दै म यो निष्कर्षमा पुगें कि युद्ध जित्ने उत्तम तरिका भनेको एक अर्कालाई नचिन्ने व्यक्तिहरूको बीचको यात्रा हो। दक्षिण अफ्रिकाको यो अन्तिम यात्रामा मैले गहन अनुभव लिएको थिएँ, जुन म यो पोस्टमा तपाईं समक्ष ल्याउनेछु। यो एक समृद्ध अनुभव थियो। यो अनौंठो कुरा हो जब तपाई धेरै पर्यटकहरू मिसिनुहुन्छ, प्रत्येक एक मिनी बसमा फरक देशबाट! वा अझ राम्रो, प्रत्येक फरक महाद्वीपबाट! हो, यस समूहमा म भन्न सक्छु कि हामीसंग contin महादेशका प्रतिनिधिहरू थिए। युरोप, एशिया, अमेरिका, ओशिनिया, र अफ्रिका। र केहि मिनेट ढिलाइ पछि, हाम्रो मार्गनिर्देशनले हामीलाई आश्चर्यचकित गर्दछ: "यहाँ यस भ्रमणमा हामीसँग यस्ता चीजहरू छैनन्: निश्चित समय"। आराम गर्नुहोस् 😎। भ्रमणको सुरूमा यो उत्साह र अज्ञानताको मिश्रण थियो ... यदि तपाईंले त्यस्ता विविध मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा मिस गर्नुभयो भने के हुन्छ? प्रत्येकको आफ्नै चलन, संस्कृति, हुने तरिका ...
बो-काप (अर्थ जुलुमा "केप माथि")
र यो विविधता दक्षिण अफ्रिकी प्रायद्वीपको सब भन्दा पुरानो गाउँ बो-कापमा पहिले नै भेट्टाइएको छ, जुन सिग्नल पहाडको डाँडामा अवस्थित छ, तपाईं विविधता आफैलाई र of्गको रूपमा देखा पर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विगतमा दासहरू थिए र तिनीहरूलाई आफ्नो घर रंगाउन निषेध गरिएको थियो। केवल किनभने पुरानो शक्तिहरूले उनीहरूको कुनै पहिचान होस् भन्ने चाहँदैन थियो, आखिरमा, दासहरू "केवल दासहरू" थिए। तर तिनीहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि र नागरिकहरूको पहिचान स्वीकारेपछि तिनीहरूले घरहरूलाई धेरै फरक रंगमा रंग्ने निर्णय गरे र प्रत्येक र colorले परिवारको स्वतन्त्रतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यसैले बोलीको स्वतन्त्रता! (यो नै सम्पूर्ण विश्वमा लागू हुन्छ) र अझ चाखलाग्दो कुरा यो हो कि यो मुस्लिमहरूले नै यो "स्थानीय परम्परा" सुरू गरे र पछि छिमेकीहरू पनि सामेल भए। यो राम्रो चीज हो जुन उनीहरू छिमेकीहरूमा सामेल भए, यो धेरै कूलर छ। जब सामूहिक कार्य गर्दछ, स्वतन्त्रता आउँछ र सबैले जित्छन्। र यही ठाउँबाट पर्यटकहरू बीच अन्तर्क्रिया हुन थाल्छ। तपाईं एउटा फोटोमा मद्दतको लागि सोध्नुहुन्छ, अर्कोमा मद्दतको लागि र चाँडै समूह फेरि मिनी बसमा आउँछ आफ्नै भिन्नता मिश्रण गर्दै।
र तपाईंले माथिको भिडियोमा याद गर्नुभयो, सौभाग्यवस मानिसहरूसँग ठूलो उर्जा थियो र चाँडै हामीले नयाँ साथीहरू बनायौं। र केवल मानव जातिको बीचमा मात्र होइन, तर अन्य साना साथीहरूसँग।
त्यो ठूलो मात्रामा थियो।
धेरै ठूलो रकम।
यदि तपाईं माथिको फोटोलाई नियालेर हेर्नुभयो भने तपाईं कुनै संसद बैठकमा केही समानता देख्नुहुनेछ, उनीहरूको सेतो सूट र शर्टसहित सबैजना विश्व शान्तिको बारेमा छलफल गर्दैछन्, वा अर्को खाना कहिले हुन्छ। हामी कहिले पनि थाहा पाउँदैनौं! तर हामी हाम्रो गाइडको सिफारिस सम्झन्छौं र हाम्रो आफ्नै प्रजातिहरु संग अधिक अन्तर्क्रिया गर्दछौं। उनीहरूलाई आफ्नो पवित्र स्थानमा र संसदीय बैठकमा एक्लै छोड्नु उत्तम थियो। उनीहरूले जेसुकै सहमति गरे निर्णय गरेपछि केहीले तिनीहरूबाट टाढा हाल्न थाले। सायद उनीहरूले अधिक गोपनीयता खोज्ने थिए। किनभने स्नेहको एक क्षणको लागि गोपनीयता चाहिन्छ।
त्यसैले हामीले पेन्गुइनहरू उनीहरूको इलाकामा छोडे र हाम्रो यात्रामा लाग्यौं।
केप गुड होप।
अन्तमा हामी राम्रो आशाको केपमा आउँदछौं, यसलाई "आँधीको केप" पनि भनिन्छ। जग्गा र बतासहरूको बलको कारण नेभिगेटर्सले लापरवाही बिरोध पार गरेको स्थान। एउटा विचारको लागि, यो एक स्थान हो जुन दुई महासागरहरू, भारतीय र एट्लान्टिकको शक्ति संयोजन गर्दछ। त्यसकारण यसलाई संयोगले पाइँदैन कि यसलाई पनि भनिन्छ: "ओ कैबो दास टोरमेन्टास" लुइस डे क्यामिजले "ओएस लुसाडास" भन्ने काममा दिएको उपनाम। जहाँ नाविकहरूले अट्लान्टिक महासागरबाट हिन्द महासागरमा सर्नको लागि एडमास्टर राक्षसलाई छल गरे। हाल, केवल बाँकी "राक्षस" बेबुनहरू हुन्। यी बाँदरहरूले प्राय: पर्यटकहरूबाट खाजा चोर्छन्। संकेतहरू पालना गर्नु आवश्यक छ र पशुहरूलाई खुवाउनु हुँदैन। अब डर पनि देखाउन आवश्यक छ, यदि तपाईंले यो देखाउनुभयो भने ऊ तपाईंको पछि लाग्न सक्छ। अवश्य पनि, हाम्रो साथीहरूको समूहले कुनै डर देखाएन, उनीहरूसँग मित्रता पनि बनाए।
त्यसपछि यो धर्मिय आँधीबेहरी पार गर्न थाल्छ! यहाँ फेरि हामीलाई केप अफ गुड होप पार गर्न मित्रताको बल र केहि हिड्न आवश्यक पर्दछ। हामीसँग १. 1.5 किमि मात्र ट्रेल छ, तर दृश्य, कडा बतास, र अनियमित ट्रेलको आनन्द लिनको लागि अनिवार्य ब्रेकको कारण, क्रसिंगले लामो समय लिन सक्दछ।
यहाँ सबै मद्दत स्वागत छ! यो अविश्वसनीय दृश्यको साथ एक सुन्दर घाट हो।
यस फोटोमा (र धेरै अरूहरू) मैले मेरो टुरमा दयालु व्यक्तिहरूमध्ये एकको मद्दत लिए। नरेनलाई भेट्नुहोस्। उनी दयालु, दया र शिक्षाको उत्तम तरीकाले मिक्स गर्ने कोही हुन्। उनको राम्रो र कडा सिद्धान्तहरूको साथ उनी सजिलै इ England्ल्यान्डको रानी हुन सक्छिन्!
नरेन हामीलाई सिकाउँछिन् कि यदि तपाई यात्रा गर्नुहुन्छ भने, झर्नु मात्र रोक्दैन। विशेष गरी यदि तपाइँसँग केहि चीजको लागि सहयोग गर्ने साथी छ। यसले हामीलाई यो पनि सिकाउँछ कि हामीले उपलब्धिहरू, सेल फोनहरू ब्याट्रीहरू, एन्टिसेप्टिक्स र एक उबरसँग साझेदारी गर्नुपर्दछ!
जो समुद्री तटलाई प्राथमिकता दिन्छन्, र ख्याल गर्दैनन् कि यदि हालको शक्तिशाली छ भने हामीसँग एक सर्टकट छ, हाम्रो साथीले पत्ता लगायो र चेतावनी दियो। Selçuk।
Selçuk पनि एक महान फोटोग्राफर हो र एक चट्टानको मजा लिन मनपराउँदछ।
र त्यसपछि हाम्रो युवा ओशिनिया प्रतिनिधि, सारालाई भेट्नुहोस्। उनी समुद्रसँग डराउँदिनन् र हामीलाई देखाउँछन् कि केही शान्त र आत्मपरीक्षण कुनै हानी छैन। खैर, यो आश्चर्यजनक ठाउँमा गर्नु राम्रो कुरा हो।
यसले हामीलाई यो पनि सिकायो कि हामी उबेर लिनको लागि तयार हुनुपर्दछ, शाब्दिक अफ्रिकाको अन्तमा पनि यस्तो ठाउँमा! हामी हाम्रो चालक दलको परिचय दिइरहेका छौं ... जेरेमी र हन्नालाई पनि भेट्नुहोस्। तिनीहरूले हामीलाई बढी साहसी पक्ष देखाए र नयाँ क्षितिजहरू पत्ता लगाउन डराएनन्। र तिनीहरूले यो पनि महत्त्व देखाए कि जहाँ गए पनि मित्रता व्याप्त छ।
मजेदलाई पनि थाहा छ, उनले हामीलाई सिकाए कि राम्रो यात्रा कायम गर्न थोरै धैर्यता आवश्यक छ। प्रोवा र प्रमाणित गर्दछ कि अस्तित्वको अद्वितीय तरीकाको बावजुद, यो राम्रो हृदय भएको र अरूलाई पनि मद्दत गर्न सम्भव छ। संसार पैसा द्वारा संचालित हुँदैन, तर मानिस जसले यसलाई बनाउँछ। यदि मानिस राम्रो छ भने, विश्व राम्रो हुनेछ। यदि व्यक्ति राम्रो छैन ... हामी तेस्रो विश्व युद्ध हुन सक्छ। कृपया राम्रो हुनुहोस्!
हामीसँग फेम पनि छ, उनी आफैंलाई फोटो बनाउनका लागि उत्तम ठाउँहरू खोज्नमा उत्कृष्ट छिन्। थप रूपमा, हामीसँग आफ्ना भिडियोहरू र जाने नयाँ ठाउँहरू साझेदारी गर्दा ऊ ठूलो हृदय देखाउँदछ।
फेम उचाइबाट पनि डराउँदैन र हामीलाई देखाउँदछ कि एक असल मित्रता नै अरूको लागि आफैंलाई जोखिममा पार्छ! र उनलाई धन्यबाद छ कि हामीसँग हाम्रो टूर बेट्टी र एन्ड्रेमा सब भन्दा अनुभवी जोडीको छवि छ। यदि तपाईं सँग मैले प्रशंसा गरेको एक जोडी छ, यो तपाईं हो! तिनीहरूले हामीलाई देखाए कि सच्चा प्रेमले समय वा कठिनाइ पनि मेटाउन सक्दैन। र त्यो यदि हामी काम गर्छौं भने हामीले के मनपर्दछ त्यसमा काम गर्नुपर्दछ, र त्यसपछि हामीले कार्य गर्न आवश्यक पर्दैन। जीवन छनौटहरु बाट बनेको हुन्छ, केहि गाह्रो, तर एउटाको निर्णयलाई अर्कोले समर्थन गर्नुपर्दछ। तिनीहरूले यो पनि देखाउँदछ कि एक पुरानो उमेरले मात्र प्राप्त गरेको अधिक अनुभवको (+70 वर्ष) को प्रतिनिधित्व गर्दछ। र यो यात्रा नगर्ने कुनै बहाना छैन। तिनीहरू पनि आकारमा छन्, तिनीहरूले हाम्रो अगाडि ट्रेल समाप्त गरे! जोडी जो सँगै यात्रा गर्छन्, सँगै रहनुहोस्!
ओह, र म कसरी हाम्रो गाइड बिर्सिन सक्छु! उहाँसँग जादुई शक्तिहरू छन्! उसले समय रोक्छ र इच्छानुसार अगाडि बढ्छ। 😎। (यसैले हामीसँग यो टुरमा एपोइन्टमेन्टको रूपमा यी चीजहरू छैनन्!) उनको नाम पेद्रो हो, तर यहाँ हाम्रो लागि ... मलाई लाग्छ यो उपनाम मात्र हो। उसलाई Chronos भन्नु पर्छ! (समयका परमेश्वर)। उसले आफूसँग साँचो दक्षिण अफ्रिकी आत्मा बोक्दछ। उहाँसँगको यो यात्रा साँच्चिकै राम्रो थियो। तिनीहरूको कथाहरू बाट, "अफिस" मा खाजा, र हामी पनि रोटी साझा अभ्यास।
समय नियन्त्रणको बावजुद, पेड्रो आफ्ना बच्चाहरू (हामी) लाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ थियो र अचानक उनी भाग्यशाली थिए र हराए! (भाग्यशाली र हराएको) उसको अनुहार माथिको तस्वीरमा हामीलाई खोज्दै हेर्नुहोस्! र महाद्वीपहरूको यो संघलाई मनाउन, राष्ट्रहरूको यो दायरा, केवल तपाईंसँग एक विशेष टोस्टको साथ समाप्त हुँदै। र दाखमद्य चाख्नु भन्दा राम्रो अरू केहि छैन! फेमका छविहरूका साथ फेरी।
र मैले वास्तवमै काम गर्नु भन्दा पहिले मैले ब्राजिलियनका बारे पनि कुरा गर्नु पर्छ जो दक्षिण अमेरिकी प्रतिनिधि थिए। हो, जो एक सबैलाई धेरै सिक्यो। र मैले सिकाएको कुराको बारेमा कुरा गर्न कत्ति गाह्रो हुन्छ। मैले सिकेको कुराको बारेमा कुरा गर्न सक्छु। रामुलो ब्राजिलियन हो र कहिल्यै हार मान्दैन। यद्यपि यो धेरै नजिक जान्छ। मैले सिकें कि आनन्द भनेको त्यस्तो चीज हो जुन भित्रबाट आउँछ।
मैले यो पनि बुझें कि आँधीबेहरी पार गर्न साँचो मित्रता चाहिन्छ। तपाईं जहाँ भए पनि, ब्राजिलका ती पनि, वा मित्रता यात्राको क्रममा बनाइएको। यदि तपाईं संसारको अन्त्यमा हुनुहुन्छ भने मित्रहरू जो तपाईंलाई सहयोग गर्न आउँदछन्।
यसैले, हामी भित्र प्रकाश र छाया छ, के बाहिर आउने र संसारको भाग हुनेछ भन्ने निर्णय गर्न यो हाम्रो हो।
र मैले यो पनि सिकें कि एक राम्रो मजाक सधैं तपाईंको अन्धकार पक्ष छोड्ने राम्रो तरिका हो। आह यदि यो हो ... विशेष गरी मद्य चाखने पछि! र यो कि एक युद्ध जीत्न को लागी, उस्तै कुरा अविश्वसनीय यात्रा छोड्नु आवश्यक छ। यो फरक मत सुन्न आवश्यक छ, र हुन सक्छ भने ती सबै बाटोमा एकजुट गर्न। तपाइँले जित्नको लागि दिनुपर्दछ। यो मद्दत गर्न सहयोग गर्न आवश्यक छ। र त्यो हामी मध्ये कसैको पनि जीत सबैको उपलब्धि हो! धैर्यता, दृढता, इच्छाशक्ति र दृढ संकल्प, तपाईंको सपनाहरूमा विश्वासको साथ तिनीहरूलाई सम्भव बनाउँदछ, तपाईंले आफ्नो हातले समात्नु पर्छ।
र संसार भरिका राम्रा मानिसहरू त्यहाँ छन्, तपाईले उनीहरू को हुन् भनेर पत्ता लगाउनु पर्छ र उनीहरूको नजिक जानुहोस्।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा, हामी कसरी कुनै पनि विश्व युद्ध जित्न सक्छौं। मतभेदहरू तोड्दै, विविधता मनाउने, नयाँ साथीहरू बनाउने, उनीहरूको विश्वास र विचारहरूको सम्मान गर्दै। तपाईंसँग विश्वास, र इच्छाशक्ति पनि हुनु आवश्यक छ। र सायद एक संसदीय बैठक जस्तै पेंगुइन को। तर मित्रताको शक्ति भनेको एक त्यस्तो शक्ति हो जुन हामीलाई अरू भन्दा राम्रो बनाउँछ। र त्यो छ कि आफ्नो छिमेकी संग शान्ति हुनु विश्व शान्ति को दिशा मा पहिलो कदम हुन सक्छ। र यसै कारणले गर्दा यो ब्लग र जीवनमा, अर्जेन्टिना, कोलम्बियालीहरू, भेनेजुएलान्स, चिली, उरुग्वे, पराग्वेन र दक्षिण अमेरिकाका अन्य देशहरू स्वागत छ। यदि तपाईंलाई यो पोष्ट मनपर्‍यो भने, यो मनपर्‍यो, यो साझा गर्नुहोस्, यसलाई कमेन्ट गर्नुहोस् (तल) र साइडमा रातो बटनमा हामीलाई पछ्याउनुहोस्, केवल एक ईमेल र तपाईंले कुनै अधिक पोष्टहरू गुमाउनु हुने छैन। 😎-> यो गर्नाले हामीलाई प्रसारमा मद्दत गर्दछ र तपाइँलाई केहि खर्च लाग्नेछैन। के हामी संसारमा पुग्नेछौं?
इतिहास तेस्रो विश्व युद्ध मित्रता दक्षिण अफ्रीका बो-काप केप गुड होप तूफान केप USA ईरान पहिलो यात्रा